Soo dejisan ESET Smart Security Premium 13.2.15 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudESET Smart Security Premium
Bogga rasmiga ah: ESET Smart Security Premium
ESET Smart Security Premium – antivirus oo leh qalab amniga ah si loo hagaajiyo ilaalinta PC-ga. Barnaamijkani wuxuu ilaaliyaa xogta shakhsiyeed ee ka soo horjeeda weerarrada shabakada iyo kuwa soo galootiga ku tiirsan hababka ammaanka ee casriga ah, oo ay ku jiraan nashqad lagu dhisay iyo nidaamka ka hortagga galmada. ESET Secure Smart Premium ayaa ogaanaya oo ka dhigaya dabeecadaha barnaamijyada shaki laga shakiyo, tirtiraya casaan-qaadaha heerkulka sirta sare, waxay ka saartaa hanjabaadaha amniga iyo waxay soo aruuriyaan weerarrada sharafeed ee xun. Barnaamijka ayaa taageera taranka nidaamka buuxa iyo xulashada si loo qiimeeyo xaaladda ammaanka ee kombuyuutarka. ESET Smart Security Premium waxaa ku jira maamulaha lambarka sirta si amaan ah loo keydiyo macluumaadka xisaabta hal meel iyo hal xaraf ah oo lagu kaydiyo faylasha kaydka oo ay ku xaddidan tahay sirta. Sidoo kale, ESET Smart Premium wuxuu siiyaa fursad kasta oo ah qaababka casriga ah iyo xulashada qaabeynta si loo go’aamiyo heerka ilaalinta lagama maarmaanka u ah sida ay u kala jeceshahay isticmaalaha.
Ogeysiis nacas ah oo khatarta ah
Ka mamnuucida gaadiidka aan la rabin ee soo socda
Bixinta lacagaha internetka
Maamulaha password, iyo keydinta faylasha faylasha
Soo dejisan ESET Smart Security Premium
Faallo ku saabsan ESET Smart Security Premium
ESET Smart Security Premium Xirfadaha la xiriira
Tool si loo xakameeyo qalabka GPS-navigation horumariyo by TomTom. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u xakameeyaan nidaamka navigation ah oo marin u ah in ay ka kooban qalab iyo.